FAQ - Kaxaynta Macdanta - ZHONGHUI INTELLIGENT ANUFACTURING (JINAN) GROUP CO., LTD
1. Waa maxay granite epoxy?
Epoxy granite, oo sidoo kale loo yaqaan granite synthetic, waa isku dhafka epoxy iyo granite oo caadi ahaan loo isticmaalo alaab kale oo loogu talagalay saldhigyada qalabka mashiinka. Epoxy granite waxa loo istcmaalay halkii laga isticmaali lahaa birta iyo birta si loo qoyno gariirka wanaagsan, cimriga aaladda, iyo qiimaha isku xidhka hoose.
Saldhig qalabka mashiinka
Qalabka mashiinka iyo mashiinada kale ee saxda ah waxay ku tiirsan yihiin qallafsanaanta sare, xasilloonida muddada-dheer, iyo sifooyinka qoyaanka wanaagsan ee alaabta saldhigga ah waxqabadkooda joogtada ah iyo firfircoonaanta. Qalabka ugu badan ee loo isticmaalo dhismayaashan waa birta la shubay, wax-soo-saarka birta alxanka leh, iyo granite dabiiciga ah. Sababtoo ah la'aanta xasilloonida muddada dheer iyo guryaha qoyaanka oo aad u liita, dhismayaasha birta ah ee la sameeyay ayaa dhif ah loo adeegsadaa halka saxnaanta sare looga baahan yahay. Birta kabka ah ee tayada wanaagsan leh ee culayska la yareeyey lagana dejiyey waxay siin doontaa qaabdhismeedka xasilloonida cabbirka, waxaana lagu tuuri karaa qaabab adag, laakiin waxay u baahan tahay hannaan makiinadeed oo qaali ah si loo sameeyo sagxadaha saxda ah ka dib marka la shubo.
Granite-dabeeciga ah ee tayadiisu wanaagsan tahay ayaa noqonaysa mid aad iyo aad u adag in la helo, laakiin waxa ay leedahay awood qoyaan ka saraysa marka loo eego birta shubka ah. Mar labaad, sida birta shubka ah, mashiinada granite dabiiciga ah waa mid xoog badan oo qaali ah.
Duubista granite ee saxda ah waxaa lagu soo saaraa isku-darka isku-darka granite (kuwaas oo la jajabiyey, la dhaqay, oo la qalajiyey) oo wata nidaamka resin epoxy ee heerkulka deegaanka (ie, habka daaweynta qabow). Buuxiyaha wadarta Quartz sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa halabuurka. Isku-duubnida gariir inta lagu jiro habka qaabeynta ayaa si adag u xirxira wadarta guud.
Galinta dunta leh, biraha birta ah, iyo tuubooyinka qaboojiyaha waa la tuuri karaa inta lagu jiro habka shubista. Si loo gaaro heer sare oo isku-dhafnaan ah, biraha toosan, dariiqyada isjiidhiyaha dhulka iyo matoorada ayaa la isku rogi karaa ama la isku dhejin karaa, sidaas darteed meesha looga saaro baahida mashiin kasta oo kabka ka dambeeya. Dhammaadka dusha sare ee shubista ayaa u fiican sida dusha caaryada.
■ Gariir qoyn.
■ Debacsanaanta: dariiqooyin toosan oo caado ah, taangiyada dareeraha hawo-biyoodka, xirmooyinka dunta, jarista dareeraha, iyo tuubooyinka marinnada ayaa dhammaantood lagu dhex dari karaa saldhigga polymer-ka.
■ Ku darida waxyaabaha la gelinayo iwm. waxay u ogolaaneysaa in si weyn loo dhimo mashiinada tuurista dhammaatay.
■ Wakhtiga kulanka waa la dhimay iyadoo lagu darayo qaybo badan oo hal shub ah.
■ Uma baahna dhumuc darbi ah oo isku mid ah, taasoo u oggolaanaysa dabacsanaan naqshadeed oo weyn oo saldhiggaaga ah.
■ Caabbinta kiimikaad ee inta badan dareerayaasha caadiga ah, acids, alkalis, iyo dareerayaasha jarista.
Uma baahna rinjiyeyn.
■Composite-ku wuxuu leeyahay cufnaan qiyaastii la mid ah aluminium (laakin qaybo ka sii dhumuc weyn ayay leeyihiin si loo gaaro awood u dhiganta).
■ Habka shubka shubka ee polymer-ka isku dhafan ayaa isticmaala tamar aad uga yar marka loo eego shubista biraha. Xabagta kabka polymerka waxay isticmaalaan tamar aad u yar si ay u soo saaraan, habka shubista waxaa lagu sameeyaa heerkulka qolka.
Maaddada Epoxy granite waxay leedahay arrin qoyaan gudaha ilaa toban jeer ka wanaagsan birta shubka ah, ilaa saddex jeer ka wanaagsan granite dabiiciga ah, iyo ilaa soddon jeer ka wanaagsan qaab dhismeedka birta la sameeyay. Ma saameynayso qaboojiyeyaasha, waxay leedahay xasillooni waqti dheer oo heer sare ah, xasilloonida kulaylka oo hagaagtay, qallafsanaan sare iyo qallafsanaan firfircoon, nuugista sanqadh heer sare ah, iyo cadaadis gudaha ah oo dayacan.
Khasaaraha waxaa ka mid ah xoogga hoose ee qaybaha khafiifka ah (in ka yar 1 in (25 mm)), xoogga cufan oo hooseeya, iyo iska caabin shoog hooseeya.
Isbarbardhigga Granite Saxda ah, Saxanka Granite Cube, Epoxy Concrete, Granite saxda ah, Saxnimada Granite Square Ruler, Mashiinka Dheelitirka Horizontal,